Hagaaji arrinta boot-ka ee Ubuntu iyo Linux Mint (Initramfs) | Laga soo bilaabo Linux
Dayactir arrinta bootka ee Ubuntu iyo Linux Mint (Initramfs)
raage291286 | | Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Dhammaantiin waad salaaman tihiin, markan waxaan rabaa inaan la wadaago sida loo xalliyo dhibaatada boot ee la yiraahdo Initramfs, Waxaan qiyaasayaa in qaarkood ay ku dhaceen iyaga oo xitaa markaan markaan qaladka helay.
Baadhitaanka shabakadda bogag kala duwan ugu dambayntii waxaan awooday inaan xog ururiyo intaas ka dib waxaan isku dayay xalka fudud waana guul.
Si loo bilaabo waxaan raacnaa talaabooyinkan:
Waxaan gelineynaa CD-ga Live-ka ah (Yaanan ilaawin inaan qaabeynno BIOS-ka si aan ugala soo baxno CD-ga).
Waxaan ku siin Ku qor waxayna na siin doontaa magaca qalabka uu PC-gaagu ku bilaabmayo. Tusaale:
Disk / dev / sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes 255 madax, 63 sectors / track, 30401 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk aqoonsiga: ********** Qalabka Boot Start End Blocks Id System / dev / sda1 * 1 30238 242886703+ 83 Linux / dev / sda2 30239 30401 1309297+ 5 Extended / dev / sda5 30239 30401 1309266 82 Linux swap / Solaris
Waxaan mar labaad ku qoreynaa bartayada waxaanna siineynaa Ku qor:
Waxaan kaa sugeynaa inaad hagaajisid qeybta. Dhamaadka waxaan dib u bilaabi doonnaa oo waa inaan si caadi ah u bilowno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Dayactir arrinta bootka ee Ubuntu iyo Linux Mint (Initramfs)
64 faallooyin, ka tag taada
Badanaa tani waxay dhacdaa marka qaybta (qaar ama dhammaantood) ay yeeshaan iswaafaqla'aan. Markii aad maamusho amarkaas waxay si joogto ah na weydiin doontaa haddii aan rabno inaan dayactirno. Si aan toos uga dhigno waxaan fulin:
# fsck /dev/sda1 -y
Waxaa sidoo kale lagu talin lahaa in la isticmaalo qalabkan iyadoo kuxiran qaybta, taasi waa:
# fsck.ext4 /dev/sda1 -y
U beddelaya ext4 nooca kala-sooc ee aan dooneyno inaan hagaajino.
Jawaab in elav
Taasi waa sax ... AAD KU darsasho wanaagsan
Waad ku mahadsantahay qoraalka iyo faallooyinka.
Ku jawaab gecoxx
elav ayaa si fiican u buuxisay wararka, waad ku mahadsan tahay macluumaadka. shaqsi ahaan daqiiqda waxaan u soo baxay 1 jeer isla bilawgii sida la tilmaamay laakiin kaligay ayaan bilaabay inaan soo kabto oo aan bilaabo, waayo? yaa garanaya laakiin waxay ahayd isla kiiskii lagu sharaxay. mahadsanid salaan.
Ugu jawaab jawaabta
Aniga oo ka hadlaya Mint, Sabtidii waxaan ka caawiyay saaxiibkay rakibida Mint, iyo wow, bilo ka dib markii la isticmaalayay Fedora runtii waa nasteexo in la arko rakibe raaxo leh oo macquul ah ...
Francisco Gomez dijo
Midkoodna maahan inuu wax hagaajiyo noocan oo kale ah, Ubuntu iyo reexaanta ayaa loo maleynayaa inay noqon doonaan kuwo loo adeegsado dadka isticmaala aasaasiga ah.
Ku jawaab francisco gomez
Taasi waa sida Francisco ay tahay laakiin ma dhaawaceyso inaad barato wax cusub oo aad ku dhaqanto.
Ku jawaab cuervo291286
Ka dib dib u soo celintii dhowaan ee ubuntu 12.04.2 waxay i siisaa dhibaatooyin aan kabaha ku dhufto (goortii ay fiicneyd). Mararka qaarkood ka dib marka la rakibo weelka waxay ku sii jirtaa shaashadda madow, ama waxay ku sii dheggan tahay ka dib shaashadda soo galitaanka iyo waqtiyada kale si wanaagsan ayey ii rartaa. Marka waxa ugu horeeya ay dhacaan waxaan aadaa TTY dib u dhiska sudo laakiin kama jawaabo, markaan soo noqdona waxaa jira fariimo badan oo qalad ah. Markuu sudho ka dib shaashadda gelitaanka mararka qaarkood AltGr + ImpPant + K ama sudo pkill Xorg oo ka socda TTY ayaa shaqeeya.
Ilaa aan aqrinayay maqaalkaaga waxaan aaminsanahay in dambiilaha uu ahaa feylka rc.local ee aniga wax laga badalay sidaa darteed kaliya kaarka isku dhafan la howlgaliyo marka la furayo, sidii aan horeyba u haystay ka hor dib u rakibida, anigoo aan dhibaato ku jirin. Laakiin hadda shaki ayaa i galiyay, suurta gal ma tahay in qayb khalad ah uu sababo guuldarooyinkan? Waxaan xusuustaa in bilowgii rakibidda rakibayaasha Ubuntu ay fariin u dirtay inay tirtireyso faylasha iska hor imanaya ...
Ku jawaab albert
Waan ka xumahay laakiin waxaan gebi ahaanba ka soo horjeedaa noocan boostada ah ee loogu yeero inay tahay xalka dhibaatada guud, waxay ku dhiirrigelinayaan akhristaha inuusan waxbaran isagoo aan sharraxaad ka bixin gebi ahaanba (waa maxay waxyaalaha la isku haysto? Maxaa loo fsck u yahay? ?) Ka dhigista kaliya nuqul oo dhaji adigoon fahmin sababta oo ka dhigaysa inay u egtahay GNU / Linux kaliya nerds.
Waan ka xumahay, laakiin adeegsadayaashu runtii waa laga caawiyey iyaga oo wax baraya, oo aan amar dambe midba midka kale saarin iyaga oo aan fahmin sababta ay wax u dhigayaan.
Waxaa loo maleynayaa in si loo xaliyo dhibaatadan waa inaad horeyba u ogaatay waxa ay ka dhigan tahay, ma bilaabi kartid inaad nuqul ka sameysid awaamiirta la koobiyeyn karo, xaqiiqda ah in sidan oo kale loo daabacay waa uun in fikrad laga siiyo xalka, laakiin waa inaad horeyba u ogaataa waxa ayaa hadlaya.
Looma baahna in la sharaxo erey kasta oo qoran.
Haddii isticmaaluhu ogyahay fsck-ka waxa uu yahay iyo meesha ay ku taal gudaha, uma baahna in uu soo galo casharro u sheegaya sida loo dhaafo fsck.
haddii qofkaasi doonayo inuu wax barto, isagu / iyadu kaliya waxay raadineysaa waxa amar kasta loogu talagalay.
Gebi ahaanba waan ku raacsanahay faalladaada.
Adigoon dhayalsan shaqada qoraaga boostada.
Noocee ah ayaa ku siinaya qaladkaas.
Illaa iyo hadda, waxaan ahaa mint 13 in kabadan 8 bilood oo waxaan haystaa koronto badan mana ku dhicin qaladkaas.
Wax kale, ma waxay noqon doontaa nooca yar yar ???
Waxay ku jiri kartaa nooc kasta oo ah Mint ama Ubuntu dhibaataduna waxay u dhacdaa si lama filaan ah, laakiin halkan waa xalka.
Waxba garan maayo dijo
Gacaliye Raven291286, waxaan ahay saynis kumbuyuutar "nosenada" laakiin waan ogahay in Linux ay tahay waxa ugu fiican suuqa waana ku qancay. Dhibaatadu waxay tahay in markay waxyaalahani dhacaan oo aan u baahdo qof iga caawiya inaan dayactirkooda ku sameeyo, maxaa yeelay sidaan kuu sharraxay, waxaan ahay kombuyuutar "nosenada", isticmaalaha caadiga ah, cidna ma heli karo waana marka aan helo super-kan goleyaasha "is-caawinta".
Marka la soo koobo, waxaan helay qof sharxaya waxa uu ahaa CD-ga Tooska ah, waan soo dajiyay, waan haystaa. hadda ma heli karo kumbuyuutarka si looga kiciyo cd-ga. Waxaan qiyaasayaa inay noqon doonto maxaa yeelay ma haysto waxa aad ugu yeerto BIOS loo qaabeeyey inuu CD-ga ka kiciyo.
Qof ma ii sharixi karaa sida aniga taas la iigu samayn karo, "nosenada" ayaa dayactiri kara kombuyuutarkayga isla markaana ka dhigi kara Linux inuu bilaabo?
Ku jawaab nosenada
Ok fiiri inaad bilowdo ma ii sheegi kartaa nooca ay tahay kombuyuutarkaaga? Oo sidaas darteed waxaan kuu sheegi karaa sida loo galo BIOS, furayaasha aad ku geli karto way kala duwan yihiin waxayna kuxirantahay PC-ga sida "F2, F8, F10, F12, F9 iwm" iskuday kuwa, waa inaad dib u bilowdaa pc-ga iyo kahor soo celiyaa boot boot mid ka mid ah furayaashan si isdaba joog ah waana sidan sida aad u gali lahayd liiska BIOS.
S Mariola dijo
Mahadsanid Raven iyo Elav
Xalalka aad tilmaamtay waxay u shaqeeyeen si hufan
Jawaab S Mariola
Waan ka xumahay cillada…. laakiin marka la fulinayo amarka: sudo fsck / dev / sda1
Waxaan qabaa tan….
fsck laga bilaabo util-Linux 2.20.1
fsck: fsck.ntfs: lama helin
fsck: khalad 2 markaad fulineyso fsck.ntfs for / dev / sda1
Runta ayaa ah anigu garan maayo waa maxay sababta ay aniga iila muuqato ...
markaa waxaan isku dayaa:
fsck / dev / sda1 -y
Way ii muuqataa:
e2fsck 1.42 (Nofeembar 29, 2011)
fsck.ext2: ogolaansho waa ladiiday iyadoo la isku dayayo furitaanka / dev / sda1
inta badan waxaad marin u leedahay r / w nidaamka faylasha ama xidid u noqo
markaa waxaan ku bilaabayaa asalka amarka: sudo -i
Mar labaad ayaan amarka ku ordaa: fsck / dev / sda1 -y
waxayna i tusaysaa tan:
Waxaan isku dayaa amarka: fsck.ext2 / dev / sda1 -y
fsck.ext2: Superblock aan ansax ahayn, iskuday xayiraado backup
fsck.ext2: Number sixir xun in super-block halka isku dayaya in la furo / dev / sda1
Superblock-ka lama aqrin karin mana qeexayo ext2 sax ah
nidaamka faylasha Haddii qaybtu shaqeyneyso oo tagayso runtii waxay ka kooban tahay ext2
faylasha faylasha (oo aan isdhaafsan ama ufs ama wax kale), ka dibna superblock:
e2fsk -b 8193
Marka maxaan sameeyaa?
ugu horreyntii, Mahadsanid!
Ku jawaab htc
ISKU DHACA AYAY IGU DHACAYAAN LATAHAY TARBIYAN !! Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo hagaajiyo ubuntu 12.04 lts
Ku soo jawaab Santiago!
Richard Warlike dijo
Hubso in sda1 uusan ahayn qaybta Windows. Si tan loo sameeyo, waxa ugu horreeya ee la sameeyo ayaa ah in dib loogu bilaabo CD toos ah ama USB toos ah ka dibna isticmaal amarka sudo fdisk -l sida ku qoran bilowga boostada iyo tallaabooyinka kale. Fdisk ma kuu ogolaanayo inaad wax ka beddesho ha hagaajin haddii la isticmaalayo. Hadaan qaldanahay fadlan i sax.
Jawaab Ricardo Bélico
Waxaan bilaabayaa inaan barto UBUNTU, waxaan ahay qof cusub. Laakiin waxaan aad u xiiseynayaa inaan wax ka barto nidaamkan qalliinka. Waxaan ku sigtay inaan ku rakibo guriga, laakiin qalad ayaan ka helay rakibida. Miyaad ii sheegi kartaa degel si faahfaahsan u sharraxaya rakibida UBUNTU iyo waxa cusub ee ay sameyn karaan markay dhibaato nooc kasta ah la kulanto. Waad ku mahadsantahay horay.
Ku jawaab Enrique
Si qurux badan dijo
Salaan Initramfs ayaa i jirdilaya. Ma jirtaa wax xal ah oo suurtagal ah oo aan lahayn CD-ga la kaban karo? Ka soo kabashada pendrive mala sameyn karaa? Hadday haa tahay, sidee baan u diyaarshaa? Mahadsanid
Looma baahna in laga soo dhejiyo Live-CD
Kaliya isticmaal qunsulka ka muuqda bilowga, wuxuu ku egyahay mashquul laakiin wali wuu shaqeeyaa kaliya uma baahnid rukhsad sudo
Waad salaaman tahay, soo jeedintaadu way i caawisay, aad baad u mahadsan tahay. Laakiin iyadu way is hagaajisaa oo waxay mar kale sameysaa. Taasi waa, ma bilaabmayo. Waxay u muuqdaan inay khaladaad ku jiraan baloogyada markii aan dib u soo helo, mararka qaarkood waxaan siiyaa iska indhatir mararka qaarkoodna ma ihi. Laakiin dhibaatadu way sii jirtaa. Ma aqaan waxa la sameeyo?
Ku jawaab fabio
Waa salaaman tahay soo jeedintu way shaqeysaa. Dhibaatadu waxay tahay in ka badan iyo in ka badan aad leedahay dhibaato isku mid ah. Intaas waxaa sii dheer hada bar-tilmaameedka iyo shaashadda shaashadda waa la waayey.
Waxaan dhigay cusbooneysiin laakiin waxba maahan, lama oggola in la cusbooneysiiyo oo waxay leedahay cilado ayaa ku jira xirmooyinka.
Nidaamka qalliinka aad haysato waa lint mint Petra.
Ku jawaab ectulu
Hello, tuke ...
Anigu ma xallin karo dhibaatada bootkayga.
Fadlan ii sheeg haddii aad gacan i siin karto arrintan. Way ka fiican tahay hadaan adeegsanno sheeko, fariin deg deg ah, waxaan dhahayaa.
Haddii aad i caawin karto, ii soo sheeg waqtiga kuugu habboon adiga iyo sidaas, markaa waxaan ku siin doonaa xogta farsamada ee qalabka ama wixii macluumaad kale ah ee aad u baahan tahay.
Hore ayaan kaaga mahadcelinayaa caawimaadda,
Waqtigaas sidoo kale waxaan dhibaato ku qabay shaashadan waxayna igu dhacday labadaba linjiga iyo aasaasiga, waxaan isku dayay wax walba oo wax shaqeynaya ma jiraan. Ugu dambayntii waxaan ogaaday inay tahay kaarkayga garaafka ee aan lagu taageerin darawalada in lagu rakibo qaab ahaan. Waxay ahayd inaan ka saaro, rakibo dhowr darawal oo markaan shaxdeyda dib u dhigo, AKHRISO. Dhamaan wanaag! Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in tan kaliya ay igu dhacday aniga oo leh mint iyo hoose, waxaan isku dayay ubuntu 14.04 iyo debian 7 mana jirin mid ka mid ah 2 disto oo isiiyay dhibaatooyin aan ka aheyn ciribtiraha yar ee shaashadda oo la waayay kadib markii la cusbooneysiiyay
Way ii shaqeyn weyday »sudo fdisk -1» waa inaan qoro »sudo fdisk -l»
Ku jawaab WARMIN4TOR
Dhammaantiin waad salaaman tihiin:
Waxaan isku dayey waxkasta oo aad ii sheegtey mana qabanaayo wax aad dhahdo waa inuu sameeyaa.
Xoogaa waan lumay.
Kiiskeyga waxaan helayaa fariintan:
buur: fuulid / dev / disk / by-uuid / 709569c0-ffc8-414e-8337-e55dd68665a1 on / root fashilmay: Doodda aan ansax ahayn
buur: sii kordhaya / dev on / xidid / dev guuldareystay: ma file ama galka sida
buur: fuulid / sys on / xidid / sysfailed: ma file ama galka sida
buurnida: kor u qaadista / kor u qaadista / xididka / proc way ku fashilantay: ma jiro faylka ama galka noocaas ah
Nidaamka faylasha la beegsanayo dib looma weydiin / sbin / cutub.
Waxba lagama helin Iskuday inaad dhaafto init = bootarg
Busybox v1.18.5 (ubuntu 1: 1.18.5-1ubuntu4.1) qolof ku dhex dhisan (ash)
Gali »caawimaad» liiska amarrada la dhisay
Waxaan kaa codsanayaa fadlan, haddii uu jiro qof fikrad ka haysta sida loo xaliyo, talaabo talaabo ii sheeg.
Ku jawaab susana
Manuel Ulloa dijo
waan ka xumahay, waxaan u maleynayaa inaan hoos ku daabacay dhibaato la mid ah hoosta,…. Aniguba isku mid baan ahay
Jawaab Manuel Ulloa
wolfgang Rodriguez dijo
Galab wanaagsan, markaad fulinayso talaabooyinkan, xog lagama waayi doono wixii aan ku kaydiyey halkaas. Waxaan ku cusubahay debian waxaanna ku hayaa macluumaad qaali ah pc-kayga. oo waxaan helay qaladka 'initramfs'.
Sugaya jawaabtaada degdega ah.
Ku jawaab wolfgang rodriguez
Waxaan hayaa kumbuyuutar kumbuyuutar ah oo leh Ubuntu 10.04. Kadib fariin qalad ah rakibaadda korontada kadib waxay muujineysaa sanduuq leh Faahfaahin kadibna OK. Calaamaduhu waa X. Waan aqbalay shaashaduna waa madow. Maxaan sameeyaa si aan u bilaabo? Ma haysto cd ama internet, laakiin waxaa la joogaa waqtigii aan mishiinka ka beddeli lahaa. Sideen ku soo ceshan karaa qaar ka mid ah macluumaadka? Miyay noqon kartaa inaan galo shaashad amar ah Ctrl + Alt + F1? Waad ku mahadsantahay caawimadaada!
U jawaab FA
Alfonso Jimenez Mohedano dijo
Way ii shaqeysay aniga oo beddelaya xulashada qaabeynta qaababka SATA ee BIOS.
Waxaan ka dhigay IDE illaa AHCI iyo voila !!
Caafimaadka @ s
Jawaab Alfonso Jiménez Mohedano
Waad ku mahadsantahay inay aniga ila shaqeysay kaliya qeybta koowaad, waad ku mahadsan tahay caawimaadda. : *
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii waxan samaynayo oo tilmaamaya in faylasha la tirtiray ... iyo haddii ay sidan tahay sida aan dib ugu soo ceshan karo ka hor intaanan dib u rakibin nidaamka, horay ayaan u mahadsan yahay
Waad salaaman tihiin, waxaan qabaa dhibaato aanan garanaynin inay la xiriirto arinta taagan, netbook-kayga, waa ubuntu wax walbana way fiicnaayeen ilaa laga cusbooneysiinayay nooca 15 haddii aan si sax ah u xasuusto, arinta ayaa ah inaan istaagay cusbooneysiinta nidaamka iyo ka tagista guriga, markii batteriga uu yimaado wuu dhintay, taas oo ah, sida muuqata ma uusan dhameystirin cusbooneysiinta waxaana loo daayay kala bar, sidee baan uga dhigi karaa inuu bilaabo
Ku jawaab rimdgard
Maxaa dhacaya ayaa ah inaan rakibo ubuntu oo aan lahaa daaqado 8 waxaan tirtiray daaqadaha 8 iyo ubuntu waxaanan doonayay inaan markale daaqado 8 xidho laakiin waxay i waydiisay inaan haysto 500 gb oo xasuusta ah sidaa ayaan ku sameeyay formatigayga disk adag oo dib ayaan u bilaabay kumbuyuutarkayga laakiin markaan galay afar ikhtiyaar ayaa u muuqday 1 ubuntu 2 ikhtiyaar oo horumarsan ubuntu 3 xasuusta tijaabada ah (memtest86 +) 4 tijaabinta xusuusta (memtest86 +, serial console 115200) oo markaan dhex dhigo ubuntu ma gasho waxayna heleysaa fariin imintramf ah oo la yaab leh wax la mid ah aniga doonayay inaan ogaado haddii la xallin karo iyo haddii kaleba mahadsanid
Ku jawaab Luis
isku duubni dijo
Qeybaha qarsoon waxaad u isticmaali kartaa fiidiyowgan: https://www.youtube.com/watch?v=91TaW1LCRkM (33 ilbiriqsi).
iyo si loo rakibo daaqadaha 8 mar labaad, maxaa yeelay nidaamka caadiga ah waa qaabeynta qaybta aad ku rakibayso, ama diskka oo aad u sii wado rakibidda.
Haddii aad rabto inaad sameyso laba-boot, si aad u bilowdo daaqadaha / ubuntu, waxaa jira dhibaato ah in hadda kombiyuutarrada cusub aysan oggolaanayn rakibidda qaybinta Linux, iyadoo ay ugu wacan tahay qaabka boot-ka ee UEFI, xaaladdayda waa inaan joojiyaa xulashadaas oo aan adeegsadaa Linux, hadaan rabo inaan isticmaalo daaqadaha markale waan dhaqaajiyaa.
Ku jawaab jawaabta
Laakiin waxa dhacaya ayaa ah inaan la ii oggolaan inaan soo galo ubuntu oo keliya ayaa muuqata oo waxay bilaabaysaa inay rarto laakiin markaa waxay bilaabmaysaa initramsf mana geli karo ama waxba ma lihi maxaa yeelay markii aan daaray ayay Ubuntu u muuqatay waxayna i weydiisay furaha iyo weliba hadda waxba iima muuqdaan, kaliya waxay umuuqataa amar bixin mana soo gasho sida ay noqon karto
Waad ku mahadsantahay caawimada
leonardo xaday dijo
Habeen wanaagsan walaalkay canaima ma bilaabmo aniguna waxaan raacayaa talaabooyinka laakiin markaan sameeyo amarka sudo fsck / dev / sda2 waan helaa
superblock lama aqrin karin mana qeexayo ext2 sax ah
faylasha haddii qalabku ansax yahay oo runtii uu ka kooban yahay ext2
faylasha diiwaanka (oo aan isdhaafsan ama ufs tagin wax kale), ka dibna superblock
waa musuqmaasuq, oo waxaad isku dayi kartaa inaad ku shaqeyso e2fsck superblck kale:
Ku jawaab leonardo hurtado
Haye, waxaan ku noolahay Venezuela dhibaatadana waxay ka dhacday qalab Canaima ah. Ma haysto cd toos ah ama USB leh xogta, ma jiri doontaa hab lagu xaliyo
Aad baad u mahadsantahay, xaqiiqdii waxay ilaalisay maalintayda, waxaan kuugu mahadnaqayaa inaad la wadaagto macluumaadka ay iigu adeegtay Kubuntu 15
Ku jawaab sam
Aad ayaad u mahadsan tahay markii ugu horeysay ee ay igu soo dhacdo waxaan rakibay ubuntu 15.04 waqtigan xaadirka ah waana xallinaa sidaad u tidhi boot disk! - Farxad
Ubuntu 16.04 waxaan ku guuleystey inaan hagaajiyo adoo ku dhajiyay Ubuntu xulashooyin horumarsan oo dooranaya ikhtiyaarka soo kabashada. Markay gaarto initramfs, waxay muujineysaa qaybta fsck, taas oo noqon doonta xijaabka bootka, markaa kaliya ordo:
fsck / dev / magaca aad tilmaamayso
Ka dibna calaamadee ikhtiyaarka "y" wixii hagaajin ah ee aad codsato
Ku jawaab BuB0
Aad baad u mahadsan tahay waxay ahayd kaamil ah!
Ma jiraa qof og sababta ay tani u dhici karto? Waxaan haystaa darawal cusub oo adag (oo hadda la iibsaday) oo xaqiiqda ah inay tan igu dhacday ayaa iga yaabisay.
Aad baad u mahadsantahay! Waxay u shaqeysaa si fiican
hello, dhibaatadaydu waxay tahay inay igu dhacdo aniga oo nool meel fog oo ay aniga uun igu rarto mashquul-sanduuq, marka amarradan aniga ima shaqeeyaan. oo anigu ma haysto wax nidaam Linux ah oo aan ku socodsiiyo.
Aad baad ugu mahadsantahay qoraalka !!!
Waxaan damiyay laptop-ka markii aan ka koobiyeyay feylalkeyga / qeeybkeyga / keydka kumbuyuutarka kadibna waxaan awoodi waayey inaan mar kale galo qeybta. Waxaan u maleynayay inay tahay inaan qaabeeyo oo aan lumiyo xoogaa xog ah, laakiin maya.
Mar labaad, aad baad u mahadsan tahay
Gabriella Vargas A. dijo
Si fiican ayaa ii shaqeysay aniga
Jawaab Gabriela Vargas A.
Victor Manuel Lopez Collado booska booska dijo
Akhyaarta sharafta leh:
Weligey ma isticmaalin Linux, shalayna waxaan rakibey Linux Mint, laakiin halka luuqaddu tagto waxaan dhigaa Mexico Latinoamerica dvorak. Sida macquul ahaan ah, markaan rabo inaan qoro ... Hagaag, waxay i siineysaa xuruuf taxane ah oo aad uga duwan tan aan doonayo inaan qoro. Sideen ku xallin karaa taas? Miyay tahay inaan qaabeeyo Hard Drive-ka oo aan dib u rakibo Linux Mint?
Waan ku qanacsanahay taladaada iyo soo-jeedintaada kahor.
Jawaab Victor Manuel Lopez Collado
Raul Agulló dijo
Waad ku mahadsantahay Boostada. Wuxuu iga saaray dhibaatada CD Knoppix CD ah.
Waan kugu hambalyeynayaa shaqada aad qabato.
Jawaab Raül Agulló
Mahadsanid .. way shaqeysay Dhibaatadaydu waxay soo muuqatay markii aan jeexjeexay qaybta qaybta hoose ee Linux. Marka laga hadlayo sharaxaadda taliska, waxaa jira gole ay ka buuxaan macluumaadkaas. Waxaan u maleynayaa ujeedada daabacadan inay tahay in la helo xalka. Tusaale ahaan waxaan raadinayay taliska. Waqtiga ha iskaga lumin raadinta shay walba micnihiisu
Ku jawaab asres
sanadlaha ah dijo
Ma fahmin sida aan ku galayo CD-ga toosinta ah iyo qaabeynta bios-ka si aan ugu xiro laptop-ka, haddii aan doono, waan ka bixi karaa dhibaatada i haysata
Ku jawaab Anuar
Mahadsanid, waad ku mahadsan tahay soo-galinta. Waxaan qaladkan kula jiraa Debian 9. Amarada ayaa si fiican aniga ila shaqeeya. Laakiin mar kasta oo aan bilaabo Windows 7 waxay igu tuurtaa qalad xijaab ah. Kadib markaan dib u bilaabo Debian markale waxaan helayaa shaashad isku mid ah waana inaan sameeyaa isla nidaamka fsck. Oo waxay dhacdaa oo keliya markaan furo Windows sababta oo ah inta soo hartay si fiican ayey u shaqeeyaan. Isku dayday dib-u-rakibid cirib waxayna i siisay natiijo isku mid ah. Xal kasta?
Andres Choque Lopez dijo
Boostada ayaa haysa war qaldan. "Initramfs" maahan magac cayayaan, waa nidaam yar oo xamuulku ku rakibayo galka daqiiqadaha ugu horeeya ee boot-ka.
Haddii boodhadhku istaago initramfs, waa sababta oo ah weli ma aadan dhejin nidaamka faylka xididka (/) dhibaato darteed.
Jawaab ku sii Andrés Choque Lopez
Waan ku darayaa maxaa yeelay waxaan ku soo gudbiyay faallada si qalad ah kahor intaanan dhammeyn.
Xalkan ka imanaya boostada ayaa shaqeynaya haddii ay dhacdo in qaybta "/" lagu dhejiyo qaladaad (sida QAYBTA AAN LAGA FILANAYN ee qaybtaas oo kale ah). Waxa jira sababo kale oo kabaha ku laalaada dhismayaasha dhexdooda oo aanu ku xaddidnayn amarka fsck, tusaalooyin: kala-sooc lama helin; uqeybinta buurta lama qeexin "/" xulashooyinka kabaha (ikhtiyaarka xididka =…); waxaa gacanta lagu faray inuu halkaa ku joojiyo. Boostada ayaa soo jeedinaysa in haddii masraxyada laga baxo, markaa "xalka" taas (iyada oo aan la arkin faahfaahinta sababta) waa sudo fsck…. Sababta
Waxaan halkaan u imid maxaa yeelay iskuxirka boostadan wali waa lala wadaagaa ilaa maantadan, wuuna i walwalayaa (wuuna i xanaaqaa) markaan arko xalalka noocan ah.
Eduardo Andres dijo
Waad ku mahadsan tahay, crow291286! Intii aan noloshayda ku jiray wax ka yar hal bil oo khibrad ah oo ku saabsan nidaamka hawlgalka Linux (aniga ayaa ah Mint 19.3), waxaa la ii soo bandhigay dhibaatadan oo nasiib daro aanan ku heli karin xalka rasmiga rasmiga ah ee Linux Mint ee Isbaanishka: halkaas oo aan cinwaan uga dhigay :
"Dhibaatooyin dhowr ah ayaa isla waqtigaas la soo bandhigay, oo ka yimid cusbooneysiin?"
Laakiin casharradan ayaa i caawiyay sidii ay u siisay xoogaa aragti ah dhibaatadayda gaarka ah (initramfs), kaliya iyada oo aan la isticmaalin "sudo" iyo isla terminal? halka dhibaatada ka muuqatay. Waxaan cadeynayaa in dhowr bog oo sidoo kale aad waxtar u lahaa ay sidoo kale waxtar ii noqdeen inaan hubiyo waxa aan sameyn doono:
https://www.youtube.com/watch?v=I_Nnq9HDQrA (Khalad baa bilaabida Linux (initramfs) go'an!)
Inay aad ufiican yihiin.
Jawaab Eduardo Andrés
John Araujo dijo
Looma baahna USB ama live cd, waxay kaloo ka imaan kartaa init, mana aha had iyo jeer / dev / sda1
Jawaab Juan Araujo
samee Bilaha 12
Lite Lite-kaygu ma bilaabayo, wuxuu dhigayaa xarafyo qaar dhaha raritaanka ramadaanka bilowga ah, sidee baan taas uga saaraa ugana tagaa sidii ay ahayd, fadlan caawi
Ku jawaab ramiro
samee Bilaha 11
Odpaliłem Linuxa z pendrive bo mam jeszcze z czasuinstacji z tego nosnika i mogę odpalać jako live usb.
Użyłem fsck waan rebootay
Ku jawaab Paweł
Katarina Jan dijo
samee Bilaha 7
Chcel by som poďakovať spoločnosti Lapo Micro Finance za poskytnutie pôžičky. Niekoľkokrát som bol oklamaný, keď som sa snažil získať pôžičku, až som narazil na spoločnosť Lapo Micro Finance, ktorá mi poskytla pôžičku v hodnote 23 000 dolárov na starostlivosť or moje choré dieťa. Ak dnes potrebujete skutočného veriteľa, kontaktujte Lapo a nenechajte sa oklamať. Kontaktný emayl: lapofunding960@gmail.com
Jawaab Katarína Ján
La soco dhaqdhaqaaqa isticmaalaha amarka acct
Ka saar username shaashadda soo galitaanka Skype